Eyona ndlela ilungileyo yokurhweba iiNtengiso zeBrokers
Ngubani oLanda iiNketho
Iinketho zokurhweba Uluhlu lwamagama
IRobhothi kunye nePhepha
Ukuqonda iinketho zee Broker kwi-Forex
Iinketho ze-Forex kunye neBhinary
Wamkelekile kwi-trader Binary, umthombo oxabisekileyo wolwazi, iingcebiso kunye nemfundo yokufunda yabarhwebi abatsha okanye abanamava abafuna ukufumanisa ngakumbi malunga nokhetho lwe-binary, i-Forex Ukuthengisa kunye ne-Cryptocurrency. Kwiwebhusayithi yethu uya kuba nokufikelela okungenamkhawulo koku kulandelayo:
• Ulwazi olusisiseko lweentlobo zokukhetha, ukuthengiswa kwengqondo kunye nokuthelekisa iindleko
• Uncedo lweqhinga - ulawulo lwemali, iintlobo ezahlukeneyo zesicwangciso, kunye nohlalutyo lobugcisa
• Uhlalutyo lomthengisi-ulwazi olucacileyo kubarhwebi abaphezulu abaqinisekisiweyo
Izikere-ingcebiso ekufumaneni umkhonyovu ezinokwenzeka
Iiakhawunti zeedemo-uphononongo kwiiakhawunti ezahlukeneyo zedemo
• Imiqondiso-ulwazi oluphambili kuluhlu lweempawu ezahlukeneyo
• Iinketho zeblogi-sukuma kunye namanqaku ethu amatsha malunga nezorhwebo zokhetho
Iinketho zobuncinci zokuRhweba kunye noPhononongo lobuGcisa
Xa urhweba kwiinketho zobunini, umntu uyacelwa ukuba aqikelele indlela apho ixabiso le-asethi linokuthi lihambe, ngokubhekisele kwixabiso lokubetha, ekugqibeleni ...
Indlela yemigangatho-isixhobo esiluncedo kurhwebo lwezinketho zobuchule
Iinketho zobuncinci zikhula ngokuthandwa ngabatyali mali behlabathi kunye neempawu zalo zokulula kunye neenzuzo ezininzi. Nangona kunjalo, njengoko iinketho zobunini zifuna umntu ukuba aqikelele iimeko ezizayo zeempahla ...
Isixhobo esinye sokuMisa sokuKhetha ukuThengisa
Nokuba ufuna ingcebiso yophuhliso lobuchule okanye ufuna ukuwela uphononongo lokujonga kubathengi abaphambili, iwebhusayithi yethu ibonelela abathengisi abatsha nabanamava ngalo lonke ulwazi olululo.
Inkqubo yokuRhweba ngeTick
Ukurhweba kwe24 / 7
Ixabiso elincinci lokurhweba nge- $ 1
Ibhonasi yasimahla ye- $ 20
I-Bunary ibonelela ngeenkonzo zorhwebo kwi-Intanethi ukusukela ngo-1999. Ngaphezu kweminyaka emine, besisoloko siphuhlisa iqonga lethu lokurhweba jikelele, ngelixa sisenza konke esinako ukwenza ukuba urhwebo lube nenkululeko kwaye lube yinzuzo kuwe.
I-Forex yimakethi yangaphandle yokutshintshiselana yamazwe angaphandle apho iimali zemali zithengiswa ngokwahlukeneyo omnye komnye. Imarike yotshintshiselwano lwangaphandle ibandakanya imali evela kwilizwe ngalinye, ethengiswa iiyure eziyi-24 ngosuku, ngoMvulo ukuya kuMgqibelo.
Isilumkiso Around Binary Options Ssrc Azisekho
Izalathiso zeTurbo ze-Forex kunye neNkqubo yokuRhweba
Ukurhweba nge-Forex kusebenza ngokuthenga imali enye kwenye imali. Iimali zihlala zizibini kunye nemali yokuqala kwisibini (enye ngasekhohlo) ibizwa ngokuba yimali 'yesiseko', ngelixa enye imali kwisibini (ngasekunene) ibizwa ngokuba yimali yasebambeni.
Umzekelo: i-EUR / i-USD- i-EUR (i-Euro) yimali esekiweyo kunye ne-USD (KwiDola yaseMelika) yimali ethembekileyo.
Inzuzo (okanye ilahleko) yenziwa ngemali enye yokuxabisa okanye ukuhla kwexabiso ngokuchaseneyo nenye imali kwibhangqa yemali.
Uthenga isibini semali ukuba uyakholelwa ukuba isiseko semali siya komelela ngokuchasene nemali ekhoyo. Uthengisa isibini semali ukuba uyakholelwa ukuba isiseko semali siya kuba buthathaka ngokuchasene nemali ekhoyo.
Inzala ilinganiswa kwiPips- Ipesenti kwiZinto. Phantse zonke izibini zemali ziye zacatshulwa kwiindawo ze-5 zokugqibela ngotshintsho kwindawo yokugqibela-ekubhekiswa kuyo njenge 'bomba'. Umzekelo, i-EUR / i-USD ixabiswe kwi-1.3542 -i-2 esekupheleni yipay. Ukuba amaxabiso e-EUR / USD anyukele kwi-1.3544, ke i-EUR / i-USD kuthiwa iphakame i-2 pips.
Xa uthenga okanye uthengisa imali kuhlala kuhlala kukho intelekelelo yamaxabiso amabini -Ixabiso lentengo kunye nexabiso lokubuza. Umahluko phakathi kwamaxabiso ubizwa ngokuba sisasazeko. Ixabiso lokufaka ixabiso libonisa elona xabiso liphezulu athe umthengi azimisele ngalo ukuhlawula imali, ngelixa ixabiso eliceliweyo limele elona xabiso lincinci umthengisi azimisele ukulifumana ngemali.
Ukurhweba nge-Forex kufakwa irhafu, kwimeko yabathengisi be-Forex, ukuxhaswa kwe-100: I-1 iyanikezelwa. Oku kuthetha ukuba urhwebo ngalunye lukhuliswa ngamaxesha e-100, lunika inzuzo ephezulu njengoko umrhwebi ekwazi ukwandisa inani elithengiweyo.
Amarobhothi aseMelika Amava oRhwebo anokhuphiswano
Ukuba ungumrhwebi onqwenela ukurhweba usebenzisa iirobhothi zika-Forex njengoko ucinga ukuba zingakwenza ngcono kunawe, awunguye wedwa ocinga njalo. Ngenxa yokuba urhwebo lwe-Forex luphenjelelwa ziimvakalelo kunye neemvakalelo zomrhwebi ngamnye, ixesha elininzi izigqibo zithambekele. Le ayisiyonto oyifunayo xa kuthengiswa imali ngababini; ke, udinga iirobhothi ze-Forex.Ngokungathandabuzekiyo ukuba ithi irobhothi ye-Forex iyenziwa ngokuzenzekelayo isoftware yekhompyuter ethengiswe ngokuthe ngqo kubarhwebi abanolwazi oluncinci okanye abanalo nzulu lwe-algorithms yentengiso ye-Forex. Kubalulekile ukwazi ukuba abathengisi babanga ukuba inzuzo ingafunyanwa nokuba awukho phambi kwePC yakho; Nangona kunjalo, kufuneka ufumane imibutho elungileyo.
Qiniseka ukuba ngokwenene ziyiyo le nto bathengiswa ukuba babe yiyo kuba ukuba uyasilela ekukhetheni irobhothi efanelekileyo ye-Forex, amathuba ungaphumelela ukwenza inzuzo. Ke, khetha iirobhothi ze-Forex kwihlathi lababoneleli. Njengoko kukho ishumi elininzi leerobhothi zorhwebo kurhwebo, kuya kufuneka uzive wonwabile malunga nokhetho onalo.
Iirobhothi ze-Forex ezithi zibabambe uthotho lweemvavanyo ezibanzi eziye zavelisa iziphumo ezonelisekileyo ngenxa yoko zithengisiwe njengezisebenza ngokugqibeleleyo ekuveliseni inzuzo engaguqukiyo inokuthenjwa. Nangona kunjalo, zeziphi iirobhothi eziphambili ze-Forex kufuneka kuthathwe isigqibo ngawe emva kohlalutyo oluninzi kunye novavanyo lwabanikezeli beenkonzo abaliqela.
Iirobhothi ezithembekileyo zeRhwebo
Umzekelo, impendulo ye-robot ephezulu ye-Forex ayisiyo ngqo-phambili; Nangona kunjalo, eyona nto ibalulekileyo ekufuneka uyiqwalasele apha kufanelekile ukuba ngowona mahluko ophambili phakathi kwendlela yokushicilela ngokuchaseneyo neendlela zokuthengisa ezizenzekelayo. Nangona kunjalo, eyona ndlela inomdla kakhulu, kuba umrhwebi we-amateur Forex, kukurhweba ngeerobhothi ezenzekelayo ze-Forex.
Ijongeka ngathi ininzi yabarhwebi ababefumana inzuzo kurhwebo ngokusebenzisa izixhobo zesintu abangavumelani neerobhothi zika-Forex; Nangona kunjalo, xa ukhetha iirobhothi eziphambili ze-Forex oza kuzisebenzisa, qinisekisa ukuba unowona mthombo ulungileyo wolwazi. Umzekelo, i-traderBinary ikunceda ukhethe irobhothi efanelekileyo ye-Forex kwaye ekugqibeleni ikuncede ube ngumrhwebi oyingcali.
Mhlawumbi yeyona ndlela isebenzayo yokuvavanya ukuba zeziphi iirobhothi eziphambili ze-Forex ukutyelela kunye nokubhalisa kwiiwebhusayithi ezaziwayo apho iirobhothi eziphambili ze-Forex ziphononongwa khona. I-traderBinary yenye yendawo enikezela ngolwazi oluneenkcukacha malunga nokunikezelwa okuphezulu kunye nezisombululo ngokunjalo.
Izicwangciso zesiseko ongakhetha kuzo
Okukhethwa kukho kanambambili-Ukuthengisa igolide
Phakathi kweentlobo ezininzi zeempahla zentengiso ezibandakanyiweyo njengezinto ezisisiseko kwimarike yokhetho lokukhetha, enye yezona zinto ziqhelekileyo ethengiswa kuyo yigolide. Uninzi lwabarhwebi bayifumana ilugqithisile ...
Izicwangciso zobuchule zokukhetha ongakhetha kuzo: I-EUR / i-USD
Iinketho zobuncinci zizisa kubarhwebi bazo iintlobo ngeentlobo zeemali ezibini ezahlukileyo zokurhweba kunye neempahla eziphambili. Inqaku elilandelayo lixoxa ngeendlela ezilula zokurhweba kwi-EUR / USD ....
Iinketho zobuchule bokuRhweba uLuhlu lweeBhinary
Iinketho zobunini zinokujongwa ngeendlela ezininzi ngeendlela ezahlukeneyo kuxhomekeka kuhlobo lwesicwangciso esiliqili sokuwenza. Inqaku elilandelayo lichaza ngokukodwa ubuchule bokurhweba nge-IN / OUT ...
Zithini izinto zorhwebo?
Ngamagama alula, izinto zorhwebo zizinto ezisetyenzisiweyo ukunceda ubomi bethu bemihla ngemihla. Sisebenzisa amandla ukuyixhasa, isinyithi ukuze
bakha izixhobo kunye nezixhobo, kunye neemveliso zezolimo zokutya. Oku-amandla, isinyithi, kunye neemveliso zezolimo - ziziindidi ezintathu zezinto ezithengiswayo, kwaye zizibhloko ezifanelekileyo zokwakha uqoqosho lwehlabathi.
Amashishini ngokubanzi afezekisa ezi ndlela zilandelayo:
Ukusebenza: Intsingiselo yokuba kufuneka kubekho isithuthi esisebenzayo sokugcinela imali ukukunceda urhwebe. Umzekelo, impahla yorhwebo ibandakanyiwe ukuba inesivumelwano sokusebenza kwikamva esabelwe sona kwenye yotshintshiselwano oluphambili, okanye ukuba inkampani iyayenza, okanye ukuba kukho ingxowa mali ethengiswayo ethengiswa njengezitokhwe kuthengiselwano.
I-Uranium, engamandla abalulekileyo yorhwebo, ayilandelwa sisivumelwano sexesha elizayo, kodwa iinkampani ezininzi zisebenza kwimigodi nasekuqhubeni lo mgodi. Ngokutyalomali kwezi nkampani, ufumana i-uranium.
Ukuhanjiswa: Ioyile eluhlaza ayifakwanga kuba inokuhanjiswa ngemiphanda, kwaye ingqolowa ibandakanyiwe kuba inokuhanjiswa yibhasi.
kwamatyalaYonke impahla yorhwebo kufuneka ibe nentengiso esebenzayo kunye nabathengi kunye nabathengisi abahlala betshintshana nabanye. Utywala lubalulekile kuba kukunika ukhetho lokungena nokuphuma kutyalo-mali ngaphandle kokujongana nobunzima bokuzama ukufumana umthengi okanye umthengisi kwezokhuseleko lwakho.
Umngcipheko ngokutyala imali kwiiNtengiso zorhwebo
Ukutyalomali konke malunga nokulawula umngcipheko obandakanyeka ekubuyiseleni imbuyekezo. Nazi ezinye zeengozi ojamelana nazo xa utyala imali kwimizi-mveliso kunye namanye amanyathelo amancinci onokuwathatha ukunciphisa le mikhwa.
Umngcipheko we-geopolisic kunye notyalo mali lwezinto
Omnye wemingcipheko yeempahla zorhwebo kukuba ubutyebi bendalo behlabathi bufumaneka kumazwekazi awahlukeneyo kunye nolawulo ngaphezulu kwezi zinto zilala noorhulumente, iinkampani zamanye amazwe, kunye nezinye izinto. Umzekelo, ukufikelela kwiidipozithi ezinkulu zeoyile ezikummandla wePersian Gulf, iinkampani zeoyile kufuneka zijongane namazwe azimeleyo akuMbindi Mpuma anokulawula le oli.
Ukungavisisani kwamazwe ngamazwe malunga nolawulo lwezixhobo zendalo kuqhelekile. Ngamanye amaxesha ilizwe eliyamkelayo liya kukhupha iinkampani zangaphandle ezithatha inxaxheba kulo
Imveliso kunye nokusasazwa kwezixhobo zendalo.
Ke ungazikhusela njani koku ungaqinisekanga? Enye indlela kukutyalomali kwiinkampani ezinamava kunye noqoqosho lwesilinganiselo. Umzekelo, ukuba unomdla ekutyalomali kwinkampani yeoyile yamazwe aphesheya, yiya kunye nengxelo egciniweyo yengoma.
Umngcipheko okhawulezileyo kwimpahla
Iimarike zorhwebo, njengebhanti okanye ivenkile yentengiso, zigcinwa ngabarhwebi abanomdla wokuqala ekwenzeni inzuzo yethutyana ngokuchaza ukuba ixabiso lokhuseleko liya kunyuka okanye liye ezantsi.
Ukuba urhweba izinto zorhwebo, hlala ujonge ukuthengisa, ufumanise kangangoko unakho malunga nokuba ngabathathi-nxaxheba kwintengiso ukuze ukwazi ukwahlula phakathi kwabasebenzisi bezentengiso kunye nabaxeli.
Umthombo omnye onokujonga kuyo kukunikezelwa kwengxelo yeZibophelelo zabaThengisi, ekhutshwa ngu IKhomishini yokuRhweba ngeeNtengiso zexesha elizayo (CFTC).
Uphengululo lweebroker zabavavanyi
Ukurhweba nge-Forex kunokubakho okukhulu kwaye umbono ngokubanzi kukuba kufuneka ungakhathazeki kakhulu malunga ne-nuances eyenza le ndlela yokurhweba. Inyaniso...
Iimpawu ezibalulekileyo ukuba uqaphele xa utyala imali kwi-Forex
Imakethi ye-Forex ibandakanya iimali ezinkulu ezisetyenziswa kwilizwe jikelele, kwaye kubalulekile ukuba abathengisi bazigcine behlaziyiwe malunga neendlela zangoku ezihambelana nemarike. Izigqibo eziyimpumelelo kwi-Forex ...
Ibhonasi yasimahla ye- $ 20 Review utyelelo
Ibhonasi Welcome Review utyelelo
✅ I-100% idiphozithi yebhonasi Review utyelelo
✅ I-50% idiphozithi yebhonasi Review utyelelo
Qhagamshelana nathi - Immimiselo & nemiqathango - Ngathi - umthetho wabucala - Policy Cookie
Isilumkiso somngcipheko ngokubanzi: Ukhetho lweBhinary Options luthwala umngcipheko ophezulu kwaye lunokubangela ilahleko kutyalo-mali lwakho. Kananjalo, uKhetho lweBhinary alunakulunga. Akufanele utyala imali ongenakukwazi ukuyilahla. Ngaphambi kokuthatha isigqibo sokurhweba, kufuneka uqwalasele ngononophelo iinjongo zakho zotyalo-mali, inqanaba lamava kunye nokunyamezelwa komngcipheko. Ngaphantsi kwazo naziphi na iimeko asiyi kuba naluphi na uxanduva kuye nawuphi na umntu okanye iqumrhu (a) nayiphi na ilahleko okanye umonakalo ngokupheleleyo okanye kwinxalenye ebangelwa, ebangelwa, okanye enxulumene nakuphi na ukuthengiselana okunxulumene nokukhetha okukodwa okanye (b) naluphi na ngqo, ngokungathanga ngqo, ngokukodwa , umphumo okanye wenzakaliso olwenzileyo.